Nigranee | » किन दुख्छ घुँडा ? यसरी गर्नुहोस् उपचार किन दुख्छ घुँडा ? यसरी गर्नुहोस् उपचार – Nigranee
किन दुख्छ घुँडा ? यसरी गर्नुहोस् उपचार
निगरानी October 18, 2019 135
अब चिसो मौसम विस्तारै शुरु भएको छ । यो मौसममा जोर्नीसँग सम्बन्धित रोगले सताउने गर्छ । बढ्दो चिसोसँगै यस्ता समस्या लिएर आउने बिरामी हरेक अस्पतालमा बढ्न थालेका छन्। यो समस्या विशेषत: हरेक वर्षको हो।
हड्डी खिइने कारण
ओस्टियोआर्थराइटिस तब हुन्छ जब हड्डीको छेउमा रहेको कुरकुरे हड्डी (कार्टिलेज) बिस्तारै बिग्रन्छ।
कार्टिलेजले जोर्नीको हड्डीमा विनाघर्षण गति प्रदान गर्ने काम गर्छ। अन्ततः, जब यो घुँडाको कुरकुरे हड्डी पूर्ण रूपमा तल झर्छ, हड्डीले हड्डीमा घर्षण गर्न शुरु हुन्छ, जसले गर्दा घुँडाको हड्डी खिइन सुरु हुन्छ।
– बढ्दो उमेर ।
– महिला, विशेषगरी महिनावारी रोकिएपछि।
– अधिक वजन जसले गर्दा घुँडामा धेरै जोड पर्छ र हड्डी खिइन शुरु हुन्छ।
– पुरानो जोर्नीको चोट र कमजोर मांसपेसी।
– लामो समयसम्म उभिएर काम गर्ने।
यस्ता देखिन्छन लक्षण
– घुँडाको दुखाइ, सामान्यतया लामो समयसम्मको प्रयोगपछि वा निष्क्रियताको अवधिपछि।
– घुँडाको जोर्नी कक्रक्क हुनु जसले गर्दा घुँडा खुम्च्याउन वा सोझो बनाउन गाह्रो हुने।
– घुँडाको जोर्नी वा जोर्नी वरिपरि दबाउँदा दुख्ने।
– घुँडाको जोर्नी लचिलो नहुनु, जसले गर्दा हिंड्न या खुट्टा चलाउन गाह्रो हुने।
– हिँड्दा वा घुँडा चलाउँदा कर्यागक्क आवाज आउने।
– कोही कोहीमा घुँडा सुन्निने, रातो, तातो हुने गर्छ।
खिइएको हड्डी उल्टाउन त मिल्दैन, तर समयमा उपचार गर्योछ भने पीडा कम गर्न र भविष्यमा निम्तिनसक्ने जटिल समस्याहरुलाई रोक्न भने अवस्य सकिन्छ।
– तौल बढी भए उचित व्यायाम र खानपिन मिलाएर तौल घटाउने, जसले गर्दा घुँडामा शरीरको वजन कम गराएर दुखाइ र घर्षण कम गराउन मद्दत गर्छ।
– घुँडाको जोर्नीलाई तातो बनाउने जसले गर्दा दुखाइको महसुस कम हुन्छ।
– चिसोबाट सकेसम्म जोगिने।
– धेरै समयसम्म उभिएर काम नगर्ने।
– लामो समय हिँड्दा लाठी वा कुनै सहारा लिएर बिसाउँदै बिसाउँदै हिँड्ने।
– धेरै दुखेको खण्डमा दुखाइ कम गर्ने औषधि खाने ।
– हर्वल चियाको सेवनले कुरकुरे हड्डीलाई जोगाउँछ ।
– थोरै मात्रामा दैनिक अदुवाको सेवनले दुखाइ कम हुन्छ ।
– बेसार र मरिच खानाले हड्डीको दुखाइ र कडापनलाई कम गर्छ ।
– सक्रिय जीवनशैली जस्तै हरेक दिन योग गर्ने, हिंड्ने, साइकल चलाउने आदि गर्नाले मांसपेसीलाई मजबुत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन रुपमा दुखाइ कम गर्छ ।
– सन्तुलित आहारको सेवन गर्ने जस्तै ब्रोकाउली, माछा (तुना, साल्मन माछा), बदाम, ओखर, चिल्लोपना कम भएका दूधजन्य उत्पादनहरू ।
– विशेषगरी महिनावारी रोकिएका महिलाहरुले आफ्नो खानामा क्याल्सियम र भिटामिन डी भएका खानेकुरा फलफूलहरु खाने।